Maakhir mee Dadkeedii? | allsanaag
Maakhir mee Dadkeedii?
Maakhir oo khatartii Alshabaab ay ugu soo biirtay khatar kale oo ah bililiqo la bililiqaysanyo degaanka
Laga soo bilaabo Laasa surad ilaa duleedla Laag ee gobolka Bari oo ay degto beesha Warsangeli, maanta waxa ka socda bililiqo degaan oo lagaga soo duulay galbeedka gobolka Sanaag iyo ganacsato fadhida koonfurta Soomaaliya oo soo dirsaday shaqaale. Magaalada Yube ee ee gobolka Sanaag, hadda waxa ku sugan gawaari boqolaal gaaraya oo ka yimid gobolada waqooyi galbeed, Awdal iyo Togdheer oo u socda inay Dahab iyo Xiji ka billiqaystaan degaanada Maakhir.
Xijigii Buurha Cal madow ee awoowe ilaa ka awoowe la kala dhaxli jiray, maanta waxa jira niman ka soo jeeda Beesha Isaaq oo ku gabanaya magaca Somaliland oo doonaya inay ka iibsadaan dadkii horay u lahaan jiray geedaha Xijiga iyaga oo u sheegaya Mulkiilayaasha Xijiga lacago badan oo ay Dhirtooda kaga iibsanayaan
Waxa kale oo jiray ciidan tiro badan oo ka soo jeeda Beelaha Isaaq iyo Gudabiisay oo ku hubaysan wax la yiraahdo ” Saacad” ee lagu baaro macdanta dhulka hoosteeda ku jirta. Nimanka macdanta Buuraha Maakhir doonaya inay bililiqaystaan waxa ilaaliya inta ay howshooda bililiqada gudanayaan maleeshiyaad ka soo jeeda Beesha Maakhir oo ka mushahaar qaata maamulka SNM oo ay madax ka yihiin qaar ka mid beesha Reer Maakhir.
Nimankan ku hubaysan Saacadaha ay ku baaranayaan buuraha Maakhir , waxay ku magcaaban yihiin shaqaalaha maamulka Somaliland inta ay howshan sharci darada ah ku jiraan oo ay ku sugan yihiin gobolka Sanaag . waxaana la og qaar ka mid ah Isimada oo dantii degaanka ka doortay Doolar. Alshabaabkii horay buurta ugu jiray, nimankan macdanta guranaya, Isimada gobolku intuba waa wada shaqeeyaan, waxaana laga wada xukumaa Hargaysa, Waana sababta ilaa hadda nimnakan saacadaha wata iyo alshabaab ay u wada joogaan ama ku wada sugan yihiin qaybo ka mid ah gobolka Sanaag
Gebagebadii degaanka Maakhir maanta khatar ayuu ku sugan yahay, buurihii Calmadow waxa xoog ku haysta alshabaab ay Somaliland kaalmayso , dhulkii waxa dul haadaya Camera Drones oo dhulka lagu sahansanayo oo ay Somaliland taageerto, Isimaddii waxay la jiraan oo ay u shaqaynayaan Somalilandta duulaanka ku ah Maakhir. Sawirka hoose Waa suldaankii Warsangeli oo Badhan ku cusumay ninka ka m’asuulka ah shaqaalaha macdanta ka qodanaya Maakhir. Wuxuu ka soo jeeda Beesha Gudabiirsay, waxaana lagu magcaabaa Sharmaarke Geele. Maamulka SNM, wuxuu ugu magcaaban yahay Gudoomiyaha Hayada Shaqaalaha. Suldaanku horay ayuu Muuse Biixi ugu casumay Badhan isaga oo aan kala tashan beel weynta Warsangeli, maata Wiilka ka soo jeeda Baki oo dahabka raadinaya ayuu ku casumay Badhan, Berito yaa la casumi doonaa xageese lagu casumi doona? . Inta aan la gaarin casumaadda danbe dadka reer Maakhir waa in degaankooda ka difaacdaan alshbaabka iyo bililiqada KHEYRADKOODA
Suldaanka Guud Ee Deegaanka Badhan Oo Qado Sharaf Sooryan Ah Ku Maamuusay Guddoomiyaha Haay’adda Shaqaalaha
← 14 milyan oo doolar yaa loo waday Reer Boosaaso oo garab istaagay xukuumada Raysal Wasaare Khayre →